Ultrasonic Wet-Precipitation of Prussian Blue Nanocubes - Hielscher Ultrasound Technology
I-Prussian Blue noma i-iron hexacyanoferrate wuhlaka lwe-nano oluhlelekile lwensimbi (MOF), olusetshenziswa ekwenzeni ibhethri ye-sodium sodium ion, i-biomedicine, uyink kanye ne-elekthronikhi. I-Ultrasonic wet-chemical synthesis iyindlela ephumelelayo, ethembekile futhi esheshayo yokukhiqiza ama-nanocubes ama-Prussian Blue nama-analogue ama-Prussian aluhlaza okwesibhakabhaka njenge-hexacyanoferrate yethusi ne-nickel hexacyanoferrate. Ama-nanoparticles we-Prussian Blue aqhakazile e-Ultrasonically abonakala ngokusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana ezincane, ukusabalalisa kanye nokusebenza okuphezulu.
I-Prussian Blue ne-Hexacyanoferrate Analogs
I-Prussian Blue noma i-iron hexacyanoferrates isetshenziswa kakhulu njengezinto ezisebenzisekayo ukuklama izinhlelo zokusebenza ze-electrochemical nokwenza izinzwa zamakhemikhali, izibonisi ze-electrochromic, ama-inki nezingubo, amabhethri (amabhethri e-sodium ‐ ion), ama-capacitors nama-supercapacitors, izinto zokugcina i-cation ezifana ne-H + noma Cs +, catalysts, theranostics nabanye. Ngenxa yomsebenzi wayo omuhle we-redox nokuqina okuphezulu kwe-electrochemical, iPrussian Blue iyisakhiwo sohlaka lwensimbi (i-MOF) esisetshenziselwa kabanzi ukuguqulwa kwe-electrode.
Ngaphandle kokunye ukusetshenziswa okuhlukahlukene, i-Prussian Blue kanye ne-analogues yayo i-hexacyanoferrate ne-nickel hexacyanoferrate isetshenziswa njengama-inki ombala oluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu nophuzi ngokulandelana.
Inzuzo enkulu yama-Prussian Blue nanoparticles ukuphepha kwabo. Ama-nanoparticles we-Prussian Blue ayabola ngokuphelele, ahambelana ngezinto ezimbili, futhi avunyelwe yi-FDA ngezicelo zezokwelapha.
I-Sonochemical Synthesis yama-Prussian Blue Nanocubes
Ukuhlanganiswa kwama-nanoparticles we-Prussian Blue / hexacyanoferrite kungukusabela kwemvula enamandla kakhulu yamakhemikhali. Ukuze uthole ama-nanoparticles asatshalaliswa ngosayizi wezinhlayiyana omncane kanye ne-monodispersity, kudingeka umzila wezulu onokwethenjelwa. Ukulindela kwe-Ultrasonic kuyaziwa ngokuhlanganiswa okuthembekile, okusebenzayo futhi okulula kwama-nanoparticles asezingeni eliphakeme kanye nezingulube ezifana ne-magnetite, i-zinc molybdate, i-zinc phosphomolybdate, ama-nanoparticles amaningi we-core-shell njll.
I-ultrasonicator UIP2000hdT iyithuluzi elinamandla le-sonochemical lokuhlanganiswa kanye nemvula yama-nanoparticles
Imizila Ye-Wet-Chemical Synthesis ye-Prussian Blue Nanoparticles
Umzila we-sonochemical we-Prussian Blue nanoparticle synthesis uyasebenza, ulula, uyashesha futhi ulungele imvelo. Imvula ye-Ultrasonic ikhiqiza ama-nanocubes we-Prussian Blue asezingeni eliphakeme, abonakala ngosayizi omncane ofanayo (approx. 5nm), ukusatshalaliswa kosayizi omncane, kanye ne-monodispersity.
Ama-nanoparticles we-Prussian Blue angahlanganiswa ngemizila ehlukahlukene yezulu noma ngeziqinisi ze-polymeric.
Ukugwema ukusetshenziswa kwe-polymer ezinzile, ama-nanocubes ama-Prussian Blue angahlehlelwe ngokuxuba i-FeCl nge-ultrasonically3 noK3[Fe (CN)6] phambi kukaH2O2.
Ukusetshenziswa kwe-sonochemistry kulolu hlobo lwamagama kusize ekutholeni ama-nanoparticles amancane (okungukuthi, ama-5 nm ngosayizi esikhundleni sosayizi ongu- ≈50 nm otholwe ngaphandle kwe-sonication). (UDacarro et al. 2018)
Ucwaningo lwezifundo lwe-Ultrasonic Prussian Blue Synthesis
Ngokuvamile, ama-Nanoparticles aluhlaza okwesibhakabhaka wasePrussia ahlanganiswa ngokusebenzisa indlela ye-ultrasonication.
Kule ndlela, isisombululo esingu-0.05 M se-K4[Fe (CN)6] yengezwa ku-100 ml yesisombululo se-hydrochloric acid esingu (0.1 mol / L). Umphumela we-K4[Fe (CN)6Isixazululo samanzi sigcinwa ku-40ºC ngamahora ama-5 ngenkathi sinikeza isisombululo bese sivunyelwe ukupholisa ekamelweni lokushisa. Umkhiqizo oluhlaza okwesibhakabhaka uyahlungwa bese ugezwa kaninginingi ngamanzi acolisisiwe ne-ethanol ephelele futhi ekugcineni womiswe kuhhavini we-vacuum ku-25ºC nge-12 h.
I-hexacyanoferrite analogue copper hexacyanoferrite (CuHCF) yenziwe yahlanganiswa ngomzila olandelayo:
Ama-nanoparticles we-CuHCF ahlanganiswa ngokuya nge-equation elandelayo:
I-Cu (NO3)3 + K4[Fe (CN)6] -> Cu4[Fe (CN)6] + KN03
Ama-nanoparticles e-CuHCF ahlanganiswa yindlela eyenziwe nguBioni et al., 2007 . Ingxube ye-10 mL engu-20 mmol L-1 K3[Fe (CN)6] + 0.1 mol L-1 Isixazululo se-KCl nge-10 ml yama-20 mmol L-1 CuCl2 + 0.1 mol L-1 KCl, kuflask sonication. Le nhlanganisela ikhanyiselwa ngemisebe ephezulu ye-ultrasound imizuzu engama-60, isebenzisa uphondo lokucwiliswa kwe-titanium ngqo (20 kHz, 10Wcm-1) elacwiliswa kwaze kwajula ngo-1 cm kusixazululo. Ngesikhathi sokuhlanganiswa, kubonakala idiphozi elinsundu ngokukhanyayo. Lokhu kusakazeka kufayelwe ngezinsuku ezi-3 ukuze kutholakale ukuhlakazeka okuqinile, okukhanyayo ngokukhanyayo.
(bheka uJassal et al. 2015)
UWu et al. (2006) ihlanganise ama-Prussian Blue nanoparticles ngomzila we-sonochemical ovela ku-K4[Fe (CN)6], lapho i-Fe2 + yakhiqizwa ukubola kwe- [FeII (CN) 6] 4− yi-ultrasonic irradiation ku-hydrochloric acid; i-Fe2+ yahlanganiswa ne-Fe3+ ukuphendula ngokusala [FeII (CN)6] 4− ion. Iqembu labacwaningi liphethe ngokuthi ukusatshalaliswa kosayizi ofanayo wama-nanocubes aluhlaza okwesibhakabhaka wasePrussia kubangelwa imiphumela ye-ultrasonication. Isithombe se-FE-SEM ngakwesobunxele sikhombisa i-sonochemically synthesized iron hexacyanoferrate nanocubes yiqembu labacwaningi bakaWu.
Ukwenziwa kwesikali esikhulu: ukulungiselela ama-nanoparticles we-PB ngezinga elikhulu, i-PVP (250 g) ne-K3[Fe (CN)6] (19.8 g) engezwe ku-2,000 mL wesisombululo se-HCl (1 M). Isixazululo senziwa senziwa saze sacaca sabe sesifaka kuhhavini ngo-80 ° C ukufeza ukusabela kokuguga amahora angama-20-24. Le nhlanganisela bese ihlukaniswa ngamasenti ngo-20 000 rpm ngamahora ama-2 ukuqoqwa kwama-nanoparticles we-PB. (Inothi lezokuphepha: Ukuze uxoshe noma iyiphi i-HCN eyenziwe, ukusabela kufanele kwenziwe endaweni evuthayo).
I-TEM micrograph yama-Prussian Blue nanocubes yazinza nge-citrate
ukutadisha nesithombe: UDacarro et al. 2018
Ama-Ultrasonic Probes kanye ne-Sonochemical Reactors ye-Prussian Blue Synthesis
I-Hielscher Ultrasonics ngumakhi wesipiliyoni wesikhathi eside owenza imishini yokusebenza ephezulu ye-ultrasonic esetshenziswa emhlabeni wonke kumalabhorethri nasekukhiqizeni izimboni. Ukuhlanganiswa kwe-sonochemical kanye nemvula yama-nanoparticles nezingulube uhlelo lokusebenza oludingayo oludinga ama-probe aphezulu we-ultrasonic akhiqiza ama-amplitudes ahlala njalo. Onke amadivayisi we-Hielscher ultrasonic aklanyelwe futhi akhiqizelwa ukusebenza ngo-24/7 ngaphansi kokulayishwa okugcwele. Amaprosesa we-Ultrasonic ayatholakala kusuka kuma-ultrasonicators e-compact 50 watts laboratory kuya kuma-16,000watts anamandla we-inline ultrasonic systems. Izinhlobo ezahlukahlukene zezimpondo ze-booster, i-sonotrode namaseli wokugeleza avumela ukusethwa ngakunye kohlelo lwe-sonochemical ngokuxhumana nabanduleli, indlela kanye nomkhiqizo wokugcina.
I-Hielscher Ultrasonics ikhiqiza ama-probes e-ultrasonic asebenza kahle kakhulu angasethwa ngqo ukuletha i-spectrum ephelele ye-amplitudes emnene kakhulu iye phezulu kakhulu. Uma uhlelo lwakho lokusebenza lwe-sonochemical ludinga ukucaciswa okungajwayelekile (isb., Amazinga okushisa aphakeme kakhulu), ama-sonotrode e-ultrasonic enziwe ngokwezifiso ayatholakala. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunayo.
Iqoqwana leSonochemical ne-Inline Synthesis
Ama-probe e-Hielscher ultrasonic angasetshenziselwa i-batch ne-sonication eqhubekayo emgqeni. Ngokuya ngevolumu yokusabela nejubane lokuphendula, sizokuncoma ukusethwa kwe-ultrasonic okufanele kakhulu.
Uhla lomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics lumboza isibonisi esigcwele sama-processor we-ultrasonic kusuka kuma-compact lab ultrasonicators ngaphezulu kwebench-top kanye nezinhlelo zokushayela kumaprosesa asezimboni asebenza ngokugcwele anamandla wokucubungula ukulayisha amaloli ngehora. Uhla lomkhiqizo ogcwele lusivumela ukuthi sikunikeze okokusebenza okufaneleke kakhulu kwe-ultrasonic kuketshezi lwakho, amandla enqubo nezinhloso zokukhiqiza.
Zonke izinqubo ze-Hielscher ze-ultrasonic zilawulwa kahle futhi ngaleyo ndlela zithembeke amahhashi omsebenzi. I-amplitude ingenye yezinqubo ezibalulekile zenqubo ezithonya ukusebenza kahle nokusebenza kwe-sonochemically ne-sonomechanically reaction. Zonke Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa avumela ukumiswa okuqondile kwe-amplitude. I-Sonotrodes nezimpondo ze-booster yizinsiza ezivumela ukuguqula ubukhulu endaweni ebanzi kakhulu. Amaprosesa aseHielscher ezimboni ze-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu futhi ahambise amandla adingekayo e-ultrasonic wezicelo ezifunwayo. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7.
Amasethingi we-amplitude aqondile nokuqapha unomphela kwemingcele yenqubo ye-ultrasonic nge-smart software kukunikeza ithuba lokuhlanganisa ama-nanocubes wakho we-Prussian Blue kanye ne-hexacyanoferrate analogue ngaphansi kwezimo ezisebenza kahle kakhulu ze-ultrasonic. I-sonication efanelekile yokuhlanganiswa kwe-nanoparticle esebenza kahle kakhulu!
I-Prussian Blue ilungile ngokwamakhemikhali ibizwa nge-iron hexacyanoferrate (Iron (II, III) hexacyanoferrate (II, III)), kepha i-colloquially ist yaziwa nangokuthi yi-Berlin blue, Ferric ferrocyanide, Ferric hexacyanoferrate, Iron (III) ferrocyanide, Iron (III) i-hexacyanoferrate (II), ne-Parisian blue.
I-Prussian blue ichazwa njenge-pigment eluhlaza okwesibhakabhaka ejulile ekhiqizwa lapho kutholakala usawoti we-ferrocyanide usawoti. Iqukethe i-ferric hexacyanoferrate (II) esakhiweni se-cubic lattice crystal. Ayincibiliki emanzini kodwa futhi ivame ukwakha i-colloid ngaleyo ndlela ingaba khona ngefomu le-colloidal noma elincibilikiswa ngamanzi, nefomu elingaxazululeki. Ifakwa ngomlomo ngezinhloso zokwelashwa ukuze isetshenziswe njengekhambi lezinhlobo ezithile zobuthi obunzima bensimbi, njenge-thallium ne-isotopes enemisebe ye-cesium.
Ama-analogue we-iron hexacyanoferrate (i-Prussian Blue) ayi-hexacyanoferrate yethusi, i-cobalt hexacyanoferrate, i-zinc hexacyanoferrate, ne-nickel hexacyanoferrate.
Ibhethri le-sodium-ion (NIB) luhlobo lwebhethri elishajekayo. Ngokuphambene nebhethri le-lithium-ion, ibhethri le-sodium ion lisebenzisa i-sodium ions (Na +) esikhundleni se-lithium njengabathwali bokushaja. Ngaphandle kwalokho, ukwakheka, inqubo yokusebenza nokwakhiwa kwamaseli kufana kakhulu nalokho kwamabhethri ajwayelekile futhi asetshenziswa kabanzi e-lithium-ion. Umehluko omkhulu phakathi kwazo zombili lezi zinhlobo zebhethri ukuthi kusetshenziswa ama-Li-ion capacitors ama-lithium compounds, ngenkathi kusetshenziswa amabhethri e-Na-ion izinsimbi ze-sodium. Lokhu kusho ukuthi i-cathode yebhethri ye-sodium-ion iqukethe izinhlanganisela ze-sodium noma ze-sodium kanye ne-anode (hhayi into esekwe kwisodiyamu) kanye ne-electrolyte engamanzi equkethe usawoti we-sodium ohlukanisiwe kuma-solvents we-polar noma aprotic. Ngesikhathi sokushaja, i-Na + ikhishwa ku-cathode bese ifakwa ku-anode ngenkathi ama-electron ehamba ngesekethe yangaphandle; ngenkathi kukhishwa, inqubo ehlehlayo yenzeka lapho kukhishwa khona i-Na + ku-anode iphinde ifakwe ku-cathode ngama-electron ahamba ngesekethe yangaphandle enza umsebenzi owusizo. Ngokufanelekile, izinto ze-anode ne-cathode kufanele zikwazi ukumelana nemijikelezo ephindaphindwayo yesitoreji se-sodium ngaphandle kokucekelwa phansi ukuze kuqinisekiswe umjikelezo wokuphila omude.
Ukuhlanganiswa kwe-Sonochemical kuyindlela ethembekile futhi esebenza kahle yokukhiqiza usawoti wensimbi ephezulu kakhulu, ongasetshenziselwa ukwenziwa kwama-capacitors e-sodium-ion. Ukuhlanganiswa kwe-powder powder kufezwa ngokusabalalisa kwe-ultrasonic yensimbi encibilikisiwe ye-sodium kumafutha amaminerali. Uma unentshisekelo yokwenza usawoti wensimbi yensimbi nge-ultrasonically, cela imininingwane engaphezulu ngokugcwalisa ifomu lokuxhumana, usithumelele i-imeyili (ku-info@hielscher.com) noma uyasibiza!
Izakhiwo ze-Metal-Organic Framework
Izinhlaka ze-Metal – organic (MOFs) ziyisigaba samakhemikhali aqukethe i-ayoni yensimbi noma amaqoqo ahlanganiswe nama-ligands e-organic, angakha izakhiwo ze-one-, two-, or three-dimensional. Ziyi-subclass yama-polymers wokuxhumanisa. Ama-polymers okuhlanganisa akhiwa yizinsimbi, ezixhunyaniswa ngama-ligands (okuthiwa ama-molecule we-linker) ukuze kwakhiwe izinhloso zokuhlanganisa eziphindayo. Izici zabo eziyinhloko zifaka phakathi i-crystallinity futhi ivame ukungena kakhulu.
Funda kabanzi mayelana nokwenziwa kwe-ultrasonic kwezinhlaka ze-metal-organic framework (MOF)!